ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 06/28/12
သမိုင်းမှတ်တမ်းအတွက် အင်မတန် အထောက်အကူုပြုတဲ့ ဒီရေးသားချက်ကို “ဦးသက်ဆွေ” က ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီး၊ ပေးပို့ လာတဲ့ “အပြင်စီး” အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
( Nik Nayman )
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:07 PM No comments:
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ အမေစုအား ချီးမြှင့်ခဲ့သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ (၁၀၀) (၂၀၁၀-၁၁)အထိ
82. Award from University of Cape Town, South Africa.
သတိ- နေ့/လ/နှစ်ခုနှစ်များ လွဲချော်တာ ရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီဘွဲ့တွေက အမေစုရရှိခဲ့ ၂၀၁၀/၁၁-အထိ ဘွဲ့-ဂုဏ်ပြုဆုများပါ။
၂၀၁၂-အတွက် ပေးခဲ့သော ဘွဲ့များ ကျန်သေးသည်။ ဥပမာ... အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပူနေးမြို့ ဟိန္ဒူတက္ကသိုလ်က ပေးတဲ့ဘွဲ့စသည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:34 PM No comments:
ကြည်စရာ နီဝါတွေလည်း မပွင့်လေတော့
မြရောင်စို သည်မြက်ခင်း ရယ်နဲ့
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:49 PM No comments:
“စပါးစိုက်သော တောင်သူလယ်သမားများမှ ထမင်းစားသော်ပြည်သူများထံ အကြံဥာဏ်တောင်းခံခြင်းစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲအား ရပ်ဝေးရပ်နီး မိတ်ဆွေများအားဖိတ်ကြားခြင်း”
“တောင်သူလယ်သမားများနှင့် နိင်ငံတော် သီချင်းစာသား” နိင်ငံတော်သီချင်းစာသားထဲက....
ဒါ တို့ပြည် ဒါ တို့မြေဆိုတဲ့ အသံတွေကြားတိုင်း
မကြေလည်တဲ့ အစာတစ်ခုကို အတင်းမျိုချရသူလို...
ဘယ်လို အဓ္ဓိါပယ်လဲ ဘယ်လိုအနှစ်သာရလဲ...
ထွန်းတုံးနဲ့ နွားကိုဖတ်ပြီး...လူသားအဖြစ် ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့...
ငါတို့ တောင်သူလယ်သမားတွေ အတွက်တော့...
ဘယ်မှာလဲ ငါတို့ပြည် ဘယ်မှာလဲ ငါတို့မြေ...
ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ထွန်ယှက်ခဲ့တဲ့ မြေကွက်တွေတောင်...
on Thursday, June 28,
2012 at 12:33pm ·
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် မြန်မာ့ လူထုခေါင်းဆောင်ဧ။် အောင်ပွဲခံအပြန်ခရီး အား လေဆိပ်မှ နေအိမ်ထိ အပြန်ခရီး တလျောက် ရန်ကုန်မြို့နှင့် အမေစုကို မြတ်နိုးသူများ စုဝေးရောက်ရှိ စနစ်တကျ စီတန်း ကြိုဆိုကြမည် ဆိုပါလျှင် လေဆိပ်မှာ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာ လမ်းတလျောက် စနစ်တကျ စီတန်း စောင့်ဆိုင်း ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြမည် ဆိုပါလျှင် လူဦးရေ သန်းနှင့် ချီပြီး ကြိုဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
ညီညွတ်စည်းကမ်းရှိစွာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာတွင် ထင်ရှားသော လူထုကြိုဆိုပွဲကြီး တခုဖြစ်လာမည်သာ မက မြန်မာ့ အနာဂတ် နိုင်ငံရေးတွင် လက်ရှိ သမတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ အတူတကွ ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံသားတိုင်း မျှော်လင့်တောင့်တ နေသည့် အသွင်ပြောင်း ဖြစ်စဉ်များကို အပြုသဘောဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီထောက်ခံပေးရာလည်း ရောက်မည်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ ပြည်တွင်းက လူငယ်များ အတွက် မဟာလှုပ်ရှားမှု တခုလည်း ဖြစ်မည့် ယခု ကမ်ပိန်းအား အဖွဲ့အသီးသီး၊ နယ်ပယ် အသီးသီးမှ မြန်မာ့ အနာဂတ်ကို ၀ိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ကြမည့် မျိုးချစ်သူတိုင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ ပါဝင်ဆင်နွဲနိုင်ပါသည်။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူတစ်သန်းကြိုဆိုရေး campaign ) အမည်ဖြင့် လူထုခေါင်းဆောင် ပြည်ပခရီးမှ အပြန် လေဆိပ်ဆိုက်ရောက် ချိန်မှ နေအိမ်သို့ အပြန်လမ်းခရီးတလျောက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ တခွင်မှ ပြည်သူလူထု သန်းနဲ့ချီပြီး စောင့်ဆိုင်းကြိုဆိုစေလိုသော ကမ်ပိန်း ဖြစ်မြောက်ရေး တပိုင်တနိုင် မိမိတို့နိုင်ရာမှ အားလုံး ပါဝင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါရန် တိုက်တွန်းနိုးဆော်ပါသည်။ ယခု သတင်းအားလည်း လက်ဆင့်ကမ်း အမြန်ဆုံး ဖြန့်ဝေ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ကျနော့် ဖုန်းနံပတ် 0949328559 ။ လူငယ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဝေလု ဖုန်းနံပတ် 09450037685ေ တို့ကိုခေါ်ဆိုပြီး သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
နေမျိုးဇင် ( မြန်မာ့လူမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ရက်)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:30 PM No comments:
အမေစု နှင့် ပြင်သစ်ရောက် မြန်မာပြည်သားများ ဆွေးနွေးပွဲ (ကိုဌေးတင့်)
အမေစု ဆုယူမည့် ပွဲသို့ တက်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသူများ။
ပေးပို့ သူ....ကိုဌေးတင့် (နယ်သာလန်) ယခုဒေါ်စုနှင့်အတူရှိနေပါတယ်...။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:18 PM No comments:
ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ်ရယူ တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြင်သစ်ဘာသာစကားဖြင့် နှုတ်ခွန်းချွေ
ပြင်သစ်နိုင်ငံမြို့ တော်ဝန် ဘာထရန်ဒီလာနိုးမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြင်သစ်နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းပါ။
ပါရီမြို့ သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဂုဏ်ပြုလွှာ
ဖိုးဖိုးကြီးတစိဦးအား ဂါရ၀တရားအလေးထား ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြင်သစ်သမ္မတ ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (ရုပ်သံ)
မြန်မာလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ ဂုဏ်ထူးဆောင်မြို့သား ဘွဲ့အား ပဲရစ်မြို့တော် ခန်းမမှာ လက်ခံရယူစဉ်။ ၂၀၀၄ခုနှစ် ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဆွေးနွေးပွဲခရီးစဉ် (ရုပ်သံ)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:33 PM No comments:
၂၀၀၄ခုနှစ်က ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့ ဂုဏ်ထူးဆောင် မြို့သားဆု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံရယူ.. ဒီမို ဝေယံ( သတင်း)
Wednesday, June 27, 2012 ဒီမိုဝေယံ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:54 PM No comments: